Shaqaalaha Madaxtooyada Puntland oo Tababar uga furmay Garoowe – Puntland Post
Posted on December 25, 2016 by dalsan
Shaqaalaha Madaxtooyada Puntland oo Tababar uga furmay Garoowe
Tababar lagu baranayey habka loo isticmaalo Email-lada Casriga ama Professional Emails iyadoo la adeegsanyo Google for Government si loo tayeeyo habka shaqada isla markaana loo adkeeyo xogta iyo sirta dawladda ayaa maanta uga furmay magaalada Garoowe shaqaalaha Madaxtooyada dawladda Puntland.
Tabarbarka ayaa ugu horrayn waxaa hadal ka jeediyey Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ah Madaxa mashruuca tayaynta iyo shaqo qorista ee uu bangiga adduunka ka caawinayo dawladda Puntland isla markaana ay ka faa’iidaysanayaan inta badan Wasaaradaha iyo hay’adaha kala duwan ee dawladda.
Madaxa mashruuca ayaa sidoo kale xusay in tababarkaani uu qayb ka yahay hannaanka kor u qaadista tayada aqoonta shaqaalaha Madaxtooyada Puntland, taas oo ka mid ah ballan qaadkii Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ahaa tayaynta iyo dib u habaynta shaqaalaha dawladda.
Agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha Madaxtooyada dawladda Puntland Ciise Maxamuud Cumar (Dalmar) oo isaguna geestiisa kelmed ka jeediyey goobta ayaa sheegay in barnaamijkaani uu yahay mid wax weyn ka anfici doona shaqaalaha Madaxtooyada isla markaana uu muhiimad gaar ah u leeyahay shaqaalaha Madaxtooyada.
Yuusuf Cabdi Soome oo ah Agaasimaha waaxda Arkiifiyada Madaxtooyada ayaa isaguna kula dardaarmay shaqaalaha Madaxtooyada in ay cilmigaan ay maanta baranayaan ku dabakhaan shaqooyinka muhimka ah ee ay u hayaa Madaxtooyada.
Ugu dambayn, Kusimaha Agaamiha guud ee Madaxtooyada ahna agaasime kuxigeenka Madaxtooyada Cawil Xasan Daad oo tababarka furay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu tababarkaani u leeyahay shaqaalaha Madaxtooyada, isla markaana waxa uu tilmaamay in uu ka mid yahay tababarkaani waxyaabihii ay ku taamaysey Madaxtooyadu.
Sidoo kale agaasimuhu waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha Madaxtooyada in ay si qoto dheer uga faa’iideystaan tababarkaan iyo casharradaan muhimka u ah shaqada Madaxtooyada isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga sugayo shaqaalaha Madaxtooyada in ay la yimaadaan is beddel mugleh.
Tababarka ayaa waxaa bixinaya Cali Siciid Maxamed (Nac-nac) oo ah khabiir dhanka Tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta ku xeel dheer isla markaana la taliye uga ah mashruuca tayaynta shaqaalaha ee Capacity Injection Project dhinaca ICT-ga, waxaana uu socondoona tabarkaasi muddo labo maalmood ah.